dadka reer somaliland iyo reer puntland waa dad walaala ah far waawayn halagu dhigo
Saturday January 13, 2018 - 15:03:18 in Maqaallo by Wariye Tiriko
dadka reer somaliland iyo reer puntland waa dad walaala ah far waawayn halagu dhigo Dadyowga ku dhaqan dhulka uduga ee puntland waa dad, dad ahaan wacan,oo waliba wanaagsan isla markaasina kula sheekaysanaya idinkuu wada doodAya.
Waxay ahayd xili aan safar ku tagay oo hawlo ii gaar ah ku joogay aagagaas.
Garoowe waa magaalo madaxta dawlad goboleedka puntland,waxana ka socda koriin xaga kobaca,WAxa ka samaysan laamiyo badan oo cusub dhulka ay ku fadhidaa puntland waa dhul aan yarayn.
Eylbaa u dhow uu ku dhararan badwaynta India,boosaasina waxay u jirtaa in lagu qiyaaso 500 oo kiilo mitir.
Shacabka ku dhaqana waa dad dagan oo cunfi iyo buuq toona lahayn,waa dad in badan ku mashquulsan hawlahooga gaar ka ah
Runtii puntland iyo Shacabka somaliland waa shacab walaala ah,had iyo jeer nabadooda halaga shaqeeyo Allan mid kasta ha u barakeeyo wanaagooga.